Wednesday January 07, 2015 - 13:24:39 in Wararka by Super Admin
Wararka Yemen ka imaanaya waxay sheegayaan in gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay ruux naftiis hure ah uu ku qarxay albaaba hore ee xarunta Booliska oo xilligaasi ay safaf dhaadheer ugu jireen dad doonayay in ciidanka booliska ku biiraan.
Wakaaladaha warar ayaa baahiyay in qaraxa lala helay goob ay maleeshiyaad xuuthiyiinta ku qaabilayeen dhalinyaro la ciidamayn rabay si ay qeyb uga noqdaan mashruuca fidinta awoodda shiicada ee wadanka Yemen.
Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ayaa bilihii lasoo dhaafay waday gummaad ka dhan ah Maleeshiyaadka shiicada wakiillada Iiraan oo qabsaday intabadan magaalooyinka wadanka Yemen iyadoona hoggaamiyaasha Al Qaacidada Jaziiradda Carabta ay ku hanjabeen in ay dili doonaan cid walba oo gacan saar laleh xuuthiyiinta ku caanbaxay gummaadka muslimiinta Yemen.
Dagaallo ka dhacay duleedyada magaalada Marka Ee Sh/Hoose.
Saldhigga Ciidanka Kenya Ee Qooqaani oo la weeraray iyo qarax ka dhacay Kismaayo.